Fifamoivoizana : 350 ireo taxi tsy ara-dalàna naato amin’ny asany | NewsMada
Fifamoivoizana : 350 ireo taxi tsy ara-dalàna naato amin’ny asany
Manohy manarina ny gaboraraka eo amin’ny fifamoivoizana indrindra ny taxi ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Raha ny tatitra nataon’ny tompon’andraikitra, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, efa mahatratra 350 ireo fiarakaretsaka tratra fa tsy ara-dalàna tao anatin’izany herinandro vitsy nanaovana fanaraha-maso izay. Naato avy hatrany amin’ny asany izy ireo taorian’ny “contre visite technique”.
Nalaina avy hatrany ny taratasin’ny fiara. Tao ireo nampidirina “fourrière” ny fiara ary ny sasany aza nesorina aminy mihitsy ny taratasy fahazoan-dalana manao fiarakaretsaka eto Antananarivo.
Tsy miverina amin’ny tompony ireo taratasy sy fahazoan-dalàna ireo raha tsy vita ny fanamboarana ny fiara. Tsy maintsy ampandalovina eny amin’ny mpanara-maso ny fahatomombanan’ny fiara miasa izany ary mahazo alàlana ara-dalàna eny vao mahazo miverina amin’ny asany indray ilay fiarakaretsaka.
Anisan’ny lesoka miharihary ny tsy fanaovan’ireo fiarakaretsaka “visite technique”. Manjaka koa anefa ny kolikoly amin’ireny sehatra fanaraha-maso ny fahatomombanan’ny fiara ireny matoa betsaka ireo mahazo taratasy kanefa tsy ara-dalàna akory ilay fiara.
Manaporofo izany indrindra ny fahitana ireo mpanera mivezivezy mitondra ny taratasin’ny fiara miaraka amin’ny tsolotra. Milahatra ety ivelan’ny toerana fanaraha-maso ilay fiara tokony hotsaraina. Mbola manjaka ny gaboraraka ary hatrany amin’io fitsarana fiara io mihitsy no tokony ho hentitra ny fisavana ataon’ny kaominina sy ny tompon’andraikitra mahefa.